सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार कहिले ? - Myagdi Online
सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार कहिले ?
वैशाख २१ । “ठुला ठुला ताल्चा लाई साना साना चापिले खोलिदिन्छ “ शिक्षा त्यही चापी हो जसको माध्ययमले भविश्यमा आइपर्ने चुनौती र अवसरको ताल्चा खोलिदिन्छ । शिक्षा हरेक व्यक्तिलाई सफल र सरल बाटोतर्फ हिड्न सिकाउने मार्ग हो । संसारमा जे–जति परिवर्तन भएका छन् त्यो शिक्षा पाएका शिक्षित विद्वान ब्याक्तित्व बाट नै भएको छ । वर्तमान परिस्थिति शिक्षा बिनाको मानिस पखेटा नभएको चरा जस्तै हो भन्दा फरक पर्दैन । जसरी पखेटा काटिएको चराले उडान भर्न सक्दैन त्यसैगरी शिक्षा नपाएको र शिक्षाबाट बन्चित ब्यक्तिले संसारिक समस्या सँग जुध्न सक्दैन ।
मानिस जन्मेदेखि मृत्युवरण नगरे सम्म आवश्यक पर्ने हतियार हो शिक्षा । मानिसको तेस्रो आँखा शिक्षा हो । जिन्दगीको अन्धकार हटाउने उज्यालो ज्योति हो शिक्षा । माथी शिक्षाको सामान्य महत्वको बारेमा केही बर्णन गरिएको हो । गरिब रास्ट्र , बढ्दो बेरोजगारी, अशिक्षित जनता भएको मुलुकमा जबसम्म आम नागरिकले सहज र सरल रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउदैनन् तब सम्म मुलुकमा समृद्धि र सुशासन आउदैन । देश बिकासको लागी शिक्षा अपरिहार्य छ । सरकारले शिक्षामा अरबौ लगानी गर्दै आएको छ तर विडम्बना भन्नुपर्छ उपलब्धि घट्दो छ । लगानीको हिसाले प्रतिफल नगन्य नै छ । सरकारले शिक्षाको स्तर उन्नतिको लागि विभिन्न कार्यक्रम त ल्याउछ तर कुनै प्रभावकारी भएको देखिदैन ।
दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा अझै पनि धेरै बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच पुगेको छैन । उनीहरु शिक्षाबाट बन्चित छन् । अहिलेपनि कतिपयलाई शिक्षाको महत्व थाहा नै छैन । अब कुरा गरौं स्थानीय बिधालयको र त्यहाको शिक्षा उन्नति स्तरको । सरकारी बिधालय भनेको सरकारले अरबौ लगानी गरेर नागरिकका बालबच्चाको लागी निशुल्क खोलिएको संस्था हो । विकसित मुलुकमा सरकारी स्कुलमा भर्ना हुन नसकेको अवस्थामा मात्र प्राइभेट स्कुलमा आफ्ना बच्चा पढाइन्छ ।
दुखको कुरा हाम्रोमा प्राइभेट स्कुलले भर्ना नलिएको खण्डमा मात्र सरकारी स्कुलमा पठाइन्छ । प्रश्न यहाँ नेर छ कि सरकारी बिधालयमा भन्दा प्राइभेट बिधालयमा पढाई कसरी गुणस्तरीय हुन्छ ? जबकी सरकारी बिधालयका शिक्षकहरु हजारौंको संख्यामा प्रतिस्पर्धा गरेर योग्य ठहरिएर नियुक्ति हुन्छन् भने अन्यथा नलागोस प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा थोरैमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यस माथी पनि नातावाद , कृपावाद , भनसुनका आधारमा शिक्षक नियुक्ति हुन्छन् ।
तर पढाइ गुणस्तरीय बोर्डिङ स्कुलमै हुन्छ कसरी ? मैले प्राइभेट स्कुलको बिरोध गरेको होइन । शिक्षकको लागि सेवा सुबिधा पनि सरकारी बिधालयमा नै बढी हुन्छ तर पनि किन बढ्दैन सरकारी बिधालयको पढाइको स्तर । किन सक्दैनन् गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरकारी विद्यालय ? अझै भनौ सरकारी बिधालय पढाउने शिक्षकले आफ्ना बालबच्चा बोर्डिङ स्कुलमा महङ्गो रकम तिरेर पढाउछन् । कस्तो लाचारीपन ! जनताको छोराछोरीलाई चाहिदैन गुणस्तरीय शिक्षा ? स्थानीय सरकारले सरकारी बिधालय पढाउने शिक्षकले आफ्ना बालबच्चा बोर्डिङ स्कुलमा दाखिला गराएको खण्डमा कारबाही गर्ने हिक्मत राख्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरु जवाफदेही हुनुपर्छ । अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी विद्यालयका समस्या पहिचान र समाधनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । नजीकको सरकारका रुपमा आफ्नो क्षेत्रको शिक्षाको अबस्था सुधार गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिकै हो । जबसम्म आधारभुत शिक्षालाई सर्वसुलभ र स्तरीय बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म शिक्षाको प्रतिफल र नजिता खोज्ने नैतिक धरातल रहँदैन् । त्यसैले हरेक स्थानीय तहले अब सरकारी विद्यालयहरुलाई सृदृढ बनाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने र शिक्षा मार्फत समृद्धिको यात्रामा लम्कनु पर्छ । अहिलेको अबस्थालाई हेर्ने हो भने सरकारी विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थिहरुको मात्रै जिम्मेवारी र दायित्वमा पर्ने देखिन्छ । तर शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न विद्यार्थि, शिक्षकसंगै अभिभावक, ब्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार सबैले आफ्नो दायित्वलाई बोध गर्नुपर्छ ।
गरिबका छोराछोरी जो गिट्टी फोरेर , बालुवा चालेर , दैनिकी ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्छन् उनीहरुको सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा चाहिदैन ? राजनीतिक दलका भातृ विद्यार्थी संगठन हरु पनि जवाफदेही हुनुपर्ने देख्छु म । कत्रा कत्रा परिबर्तन गरियो आन्दोलन गरियो भनेर चोकमा भाषण गरेर कस्तो परिवर्तन भयो त शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ? सर्वहारा नागरिकका सन्तानले पाए त गुणस्तरीय शिक्षा ? देशलाई समृद्ध भएको देख्न , विकासशील मुलुक बनाउन राजनीतिमा होमिएको नै हो भने सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हो । खै कुरा बुझेको ! विदेशमा श्रम पसिना बेचेर आफ्ना सन्तानलाई महँगो शुल्क तिरेर बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने रहर होइन बाध्यता हो । गुणस्तरीय शिक्षा आम नागरिकको अधिकार हो । सरोकारवालाहरु लाई प्रश्न गरिब नागरिकका सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा कहिले मिल्छ ?
नेपालमा कोरोना संक्रमितको कूल संख्या २०९९ पुग्यो7घण्टा अगाडि
दरबाङको क्वारेनटाइनमा बसेका युवा पाैडी खेल्न जाँदा म्याग्दी खोलाले बगाएर बेपत्ता 8 घण्टा अगाडि
विकासलाई दिर्घकालीन बनाउँदै बसाइसराई रोक्न सांसद केसीको जोड 12 घण्टा अगाडि
पर्वतमा पनी कोरोना संक्रमण पुष्टी, एकैदिन ५ जना संक्रमित, गण्डकीमा संक्रमित संख्या ३७ पुग्यो 12 घण्टा अगाडि